Zimbabwe's next leader prepares to take power Friday » Capital News
On arrival back in Harare, Emmerson Mnangagwa was treated to a hero’s welcome ahead of his inauguration as Zimbabwe’s president on Friday © AFP / Jekesai NJIKIZANA
By AGENCE FRANCE PRESSE, Harare, Zimbabwe, Nov 22 – Zimbabwe’s Emmerson Mnangagwa was preparing Thursday for his new role as president after a triumphant return home following the dramatic departure of Robert Mugabe, ending 37 years of authoritarian rule.
It was a triumphant return for Emmerson Mnangagwa who had fled Zimbabwe two week’s earlier after his sacking by Robert Mugabe © AFP / Jekesai NJIKIZANA
Mnangagwa told hundreds of supporters on Wednesday that they were witnessing “a new and unfolding full democracy”.
Profile of Emmerson Mnangagwa, who is to be sworn in as Zimbabwe’s president on Friday © AFP / Vincent LEFAI
The inauguration will be held at the 60,000-capacity National Sports Stadium, and organisers have called on Zimbabweans “from all walks of life” to come and witness the “historic day”.
Regional heavyweight South Africa said President Jacob Zuma would not be present as he would be hosting a visit by Angola’s new head of state.
Zuma also praised Mugabe, noting “his contribution to the liberation of the Southern African region and the decolonisation of the continent”.
– Loosing the ‘democratic genie’ –
Robert Mugabe’s exit has created an atmosphere of expectation in Zimbabwe, a country which endured 37 years under his iron fist © AFP / TONY KARUMBA
“We shall closely watch his next move,” said party spokesman Obert Gutu.
– Addressing the economy –
Leading economic indicators for Zimbabwe © AFP / Jonathan STOREY
The state-run Herald newspaper said in Thursday’s edition that “doors will now be open” for economic growth.
Mugabe had ruled Zimbabwe almost unopposed since independence in 1980, eventually becoming the world’s oldest serving head of state.